Nampiasa ranon-doko matevina i Canada tamin'ny famolavolana ny famokarana
Malagasy Nampiasa ranon-doko matevina i Canada tamin'ny famolavolana ny famokarana
Ny rindrin'ny rindrin'ny alimina sy ny tafo lamba dia manana endrika mahafinaritra sy loko mamirapiratra. Ny ankamaroany dia ampiasaina amin'ny zaridaina, orinasa, toeram-ponenana, hotely, trano fampirantiana, vakansy, trano efa misy ary trano maoderina.
Ny alimina ny rindrina ary ny ravin-trano vita amin'ny rindrina fanitso dia mivarotra manerana izao tontolo izao tahaka ny Guiena, Pakistan, Inde, Tusnia, Georgia, sns. Tian'izy ireo ny rindrina fanitso sy ny tafo fanitso ho an'ny trano fonenana.
Ny alam-barotra Aluminium Aluminium sy ny tafo fanitso dia mialoha ny famolahana ny bobbe dia 1000mm, ny fampiasana ara-materialy vita amin'ny alàlan'ny vy ao amin'ny PPGI. Ary aorian'ny famolavolana ny famolavolana ny sakan'ny common dia 840mm.
Ny rindrina Aluminium feno sy ravin-trano vita amin'ny rindrina vita amin'ny rindrina dia ahitana ny decoiler, milina famolahana milina, rafitra fanaraha-maso ny ordinatera, puncher amin'ny aterineto ary mandingana ny latabatra.